Inona ny elatry ny paikadim-barotrao? | Martech Zone
Inona ny elatry ny paikadim-barotrao?
Asabotsy, Jona 1, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Omaly dia nanomboka namaky ny bokin'i Nick Carter aho Segondra roa ambin'ny folo: ny fampiakarana ny filanao ilaina. Tiako ilay fampitahana momba ny orinasa iray toy ny sidina ao amin'ilay boky ary i Nick dia mamaritra azy tsara.
Iray amin'ireo dinika voalohany ny atraka. NASA mamaritra ny fiakarana toy izao manaraka izao:
Ny fiakarana no hery manohitra mivantana ny lanjan'ny fiaramanidina ary mitazona ny fiaramanidina eny amin'ny rivotra. Ny fiakarana dia vokarin'ny faritra rehetra amin'ny fiaramanidina, fa ny ankamaroan'ny fiakarana amin'ny fiaramanidina mahazatra dia vokatry ny elatra. Ny fiakarana dia hery aerodynamika mekanika novokarin'ny fihetsiky ny fiaramanidina namakivaky ny rivotra. Satria hery ny fiakarana, dia haben'ny vector izy io, samy manana ny habeny sy ny lalana mifandraika amin'izany. Ny fiakarana dia mihetsika eo afovoan'ny tsindry ataon'ny zavatra ary mitarika perpendikular amin'ny tari-dàlana.
Omaly alina, tompona orinasa iray hafa izaho sy nisotro zava-pisotro vitsivitsy ary nifanakalo hevitra momba ny angovo sy ny fifantohana nanananay niaraka tamin'ny orinasanay izahay. Samy mandeha tsara ny orinasanay roa tonta, saingy fampiasam-bola tsy toko tsy forohana no nalaina taminay Heveriko fa tsy misy mahatsapa, mandra-panombohany orinasa, izay takiny. Manomboka amin'ny fidirana ao amin'ny tahiry, amin'ny fanasongadinana ny momba ny vola, amin'ny olan'ny mpiasa, hatramin'ny varotra, kaonty ary hetra… tsy fantatry ny olona fa amin'ny fotoana tena iasantsika amin'ireo mpanjifanay dia mila angovo farany izy.
Mila mitahiry angovo arak'izay tratra isika ka manana ny maotera foana ary manana ny orinasa atraka. Ny fifandirana sy ny olana dia tsy azo sintonina satria izay mandany angovo betsaka lavitra noho izay zakantsika. Alao an-tsaina ny sidina iray nandanianao solika be loatra hahatongavana any amin'ny toerana alehanao… hianjera ianao. Vokatr'izany dia nanjary tapa-kevitra kokoa sy haingana kokoa aho tamin'ny valinteny sy ny hetsika noho ny tamin'ny lasa.
Lift no toetra mampiavaka ny fitaovana manidina sy manidina rehetra. Rehefa mijery ny orinasako aho, ny atraka of DK New Media dia, tsy isalasalana, ity bilaogy ity. Ny fananganana an'ity bilaogy ity dia nitarika ny mpihaino anay, ny bokiko, ny firesahana amiko, ny asako miaraka amin'ireo orinasam-pandraharahana sy orinasa teknolojia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary ny fandraisana mpiasa ao aminay sy ny asanay mitohy. Raha misy elatra amin'ny orinasako dia ity blog ity.
Ka na inona na inona ratsy ataoko isan'andro, ohatrinona ny fandaniako angovo, ny volan'ny asako, ohatrinona ny vola ao amin'ny banky ary inona ny olan'ny mpanjifa mety hananako, manome antoka foana aho fa manana ny orinasako atraka. Fantatro fa maro ny antsipiriany momba ny sidina tokony hojereko (ary ny bokin'i Nick dia manampy ahy hifantoka amin'izany), fa tsy hohadinoiko mihitsy ny fototry ny asantsika rehetra - ity bilaogy ity. Ity bilaogy ity dia namela anay hisidina ary hitondra antsika amin'izay tiantsika haleha. Mila miantoka fotsiny aho fa mitazona hatrany ny maotera ary manohy mitazona antsika hatrany.
Inona avy ireo elatra amin'ny orinasanao?
Manan-tsaina ve ny mpanjifa?
Maninona aho no mankahala ny kaonty voamarina
3 Jun 2013 amin'ny 9:29 AM
Misaotra anao. tena manampy ahy